USeema ubona kulula ukuqhubeka la okugcine khona uNcikazi kwi-Arrows
Uncoma inqanawe yeqembu alifice libunjwe nguMandla Ncika, umqeqeshi omusha weLamontville Golden Arrows, uLehlohonolo Seema.
USeema usanda kwethulwa ngokusemthethweni kuBafana Bes’thende abasanda kushiywa uNcikazi ojoyine i-Orlando Pirates emasontweni edlule. Ngaphansi kukaNcikazi i-Arrows ishaye into ecokeme ngesizini edlule yaze yaqeda endaweni yesine kwilogi yeDStv Premiership.
“Okokuqala nje, ngithanda ukubonga usihlalo (uMato Madlala) ngokunginika ithuba lokuthi ngizosebenza kwi-Arrows, ikakhulukazi ngemuva kwesizini enhle ababe nayo.
“Ngicabanga ukuthi kumele ngibalule igama lomqeqeshi uMandla (Ncikazi) ukuthi wakhe isisekelo esihle lapha, waphinde washiya kunabadlali abahle,” kusho uSeema.
USeema ubeqeqesha iChippa United ngesikhathi semidlalo yokuhlunga. Leli qembu elizinze e-Eastern Cape ligcine lihlalile kwiPremiership ngemuva kwemidlalo yokuhlunga ebinezigameko, ngenxa yecala leRoyal AM elisaqhubeka.
“Usuku lwami lokuqala namuhla siziqeqesha kodwa uyazibonela ukuhlangana nokubumbana okukhona lapha, okukhombisa kona ukuthi abadlali bazimisele ukusebenza kanzima.
“Ngingasho ngithi umqeqeshi uMandla wenze umsebenzi omuhle nethimba lakhe labaqeqeshi abasebenzisana nalo,” kubeka uSeema owake wayibamba kwi-Orlando Pirates njengomdlali.
UNcikazi ubesebenzisana noMabhuti Khenyeza njengephini lakhe kuBafana Bes’thende. Ngabe uSeema uzofika nephini lakhe njengoba sekunguyena umqeqeshi?
“Angifikanga namuntu, ngimtshelile usihlalo ukuthi ngizosebenzisana nawo wonke umuntu okhona lapha. Abadlali uyababona ukuthi bebefuna ukwazi ukuthi umqeqeshi omusha uza nani. Ngibatshelile ukuthi sisazodlala ibhola, akukho okutheni okuzoshintsha.
FUNDA NALA: Isiphenduke umbango iMandela Marathon
“Lona ngumshini obuvele uhamba, ngakho ukuba yingxenye yawo kusho ukuthi ngizosebenza nethimba labaqeqeshi elisebenze kanzima kakhulu.
“Umqeqeshi uMabhuti usekhona nabanye abaqeqeshi abebevele besebenza. Siyilindele futhi siyibheke ngabomvu isizini entsha nenselelo entsha. Sibatshelile abadlali ukuthi lukhulu olubhekwe kubona manje.
“Ake sibone ukuthi singenza kangcono yini kunendlela esenze ngayo ngokwedlule. Sesiqalile ukusebenza kanzima ukulungiselela isizini ezayo,” kuphetha uSeema.
Previous Previous post: UKeet uthokozile ngokuphinde asebenze noTinkler kwiCitizens
Next Next post: IPirates ihloma ngezibabuli zabadlali kodwa eyomqeqeshi ayicaci